नम्बर मार्फत ईमेल मार्केटिंग Martech Zone
नम्बरहरू द्वारा ईमेल मार्केटिंग
शनिबार, मार्च 10, 2007 शनिबार, अक्टोबर 20, 2018 Douglas Karr
मेरो राम्रो मित्र, क्रिस बगगट, आफ्नो पहिलो पुस्तक, ईमेल मार्केटि By बाई दि नम्बर्स जारी गर्दैछ। क्रिसले पुस्तक लेखेका थिए अली बिक्री, मेरो अर्को साथी
क्रिस यसका संस्थापक साथी हुन् सटीक लक्ष्य, कम्पनी मैले एक उत्पादन प्रबन्धकको रूपमा काम गरीरहेको छु। क्रिसको ब्लग (अन्य शानदार नेताहरू र कर्मचारीहरू सहित) एक्स्ट्याक्टरेटलाई स्ट्र्याटोस्फीयरमा धकेल्यो - इंकको the०० सब भन्दा द्रुत बृद्धि गर्ने कम्पनी मध्ये एक नाम छ.
मलाई एक्सेक्टरेटमा क्रिससँग काम गर्ने खुशी मात्र भएन, म उनीको पुस्तकमा पनि डेब्यू गर्दै छु - अटोमेसन र एकीकरणमा बोल्दै। म पुस्तक पढ्नको लागि उत्सुक छु साथ साथै प्रिन्टमा आफैंलाई हेरेकोमा मेरो उत्साह! म पत्रिकामा लेखेको छु र लेखिएको छु, तर कहिले पनि पुस्तक छैन। यो आफैंले मलाई लेख्न सुरू गर्न धकेल्छ, मसँग मेरो ging 75 पृष्ठहरू छन् जुन मैले मेरो पहिलो वर्षको ब्लगि learnedमा सिकेका छन्। मलाई यसको लागि फिर्ता जान आवश्यक छ, यद्यपि!
क्रिस पनि आफ्नो अर्को कम्पनी शुरू गर्दै छ, कम्पेन्डियम सफ्टवेयर। मलाई यस स्टार्टअपमा क्रिससँग काम गर्न पाउँदा रमाईलो लाग्यो - हामीले धेरै साँझमा ब्लगिंग प्रयोगकर्ता इन्टरफेसको दुर्भाग्यपूर्ण जटिलता र पाठकहरूको असक्षमता सामग्री सजिलै भेट्टाउन सक्षम हुने कुरा गर्न बित्यौं। तपाईंले नक्शामा कम्प्यान्डियम देख्नुहुनेछ जुन चाँडै नै गरिरहेको छ! म यसमा रहेको झोलाबाट धेरै बाहिर निस्कन चाहन्न, तर क्रिसको दर्शन यथार्थमा आएको हेर्न पाउँदा म उत्साहित छु सटीक लक्ष्य गर्नुभयो। क्रिस अहिले कम्पेन्डियम फुल-टाइममा काम गर्दैछ। मसँग कलेज जानको लागि एउटा छोरा छ, त्यसैले मैले सुरक्षित मार्ग छान्नुपर्‍यो र एउटा कम्पनीसँग टाँसिरहनुपर्थ्यो जुन पहिले नै विस्फोट भइरहेको छ!
नम्बरहरू द्वारा तपाईंको ईमेल मार्केटिंगको प्रतिलिपि प्रि-अर्डर गर्नुहोस्! ईमेल अझै पनि अविश्वसनीय टेक्नोलोजी हो धेरै टन वचनको साथ। कुनै पनि अन्य प्रविधि भन्दा फरक, अनुमति-आधारित ईमेल अझै 'पुश' मार्केटिंगको अगाडि छ। त्यो हो, तपाईंले मलाई तपाईंसँग कुराकानी गर्न अनुमति दिनुभयो, र म त्यो सञ्चार तपाईंलाई अगाडि बढाउन सक्दछु। टेलिभिजन, रेडियो, समाचार पत्र, आरएसएस अझै ग्राहक, ग्राहक वा सम्भाव्यतामा 'ट्युन इन' मा ठूलो निर्भरता छ। ईमेल हाम्रो लागि दैनिक जीवनको अंशमा बढेको छ (ईमेल भन्दा पहिले मैले के गरें थाहा छैन!) र त्यसरी जारी रहनेछ।
म पुस्तकको एक प्रति प्राप्त गर्न को लागी प्रतीक्षा गर्न सक्दिन! र यो अझ राम्रोसँग लिइन्छ, क्रिस!
टैग: क्रिस baggottइमेल मार्केटिङईमेल मार्केटिंग पुस्तकसंख्या मार्फत ईमेल मार्केटिंग
टेक्नोराटी रैंक वर्डप्रेस प्लगइन संस्करण २ रिलिज भयो!
SOAP'd: एक अर्को प्रोग्राम स्क्र्याच गर्नुहोस्
मार्क्स 26, 2007 मा 2: 17 PM
मैले यो पुस्तक खोजेर तपाईंको साइट फेला पारे; ) यस्तो लाग्दछ कि यसले जाँच गर्न लायक हुन्छ।
मार्क्स 26, 2007 मा 6: 15 PM
मलाई आशा छ! क्रिस एक महान केटा हो र एक इमेल इभान्जेलिस्ट हो जसले गत5वर्षदेखि विश्वभर इमेलको शक्तिलाई टेवा गरेको छ। उनको सल्लाह प्रमाणित र अगाडि छ। इमेललाई अलिकति "हिजोको" प्रविधि जस्तै हेरिएको छ तर यो केहि पनि हो। मार्केटरहरूले इमेल एकीकरण, ल्यान्डिङ पृष्ठहरू, ट्रिगर गरिएका पठाउनेहरू, आदि खोजिरहेका छन्। तिनीहरूको साइटहरूमा अधिक र अधिक ट्राफिक र राजस्व ड्राइभ गर्दै छन्।
अप्रिल 11, 2007 मा 2: 10 PM
म सहमत छु। ग्राहक सूचीमा डबल-अप्टमा राम्रोसँग राखिएको ईमेलको शक्तिलाई कहिले पनि कम नउठाउनुहोस्।
अप्रिल 27, 2007 मा 8: 49 एएम
यो एउटा उत्कृष्ट पुस्तक हो र एटलान्टाको हाम्रो सर्कलमा यसको वरिपरि बज सुरु भएको छ। डग, तपाईको ब्लग फेला पार्न पाउँदा राम्रो लाग्यो र तपाईलाई शुभकामना, क्रिस र सही लक्ष्य र कम्पेन्डियममा विचार गर्ने नेताहरूलाई। एटलान्टा फर्कनुहोस् र मसँग एक स्टेक लिनुहोस्! स्कट
अप्रिल 27, 2007 मा 9: 20 एएम
तपाईबाट सुन्न पाउँदा खुसी लाग्यो र तपाईले मलाई भेट्टाउनुभयो! म तपाईसँग छिट्टै भेट्न उत्सुक छु।
थाहा नभएका मानिसहरूका लागि: परिभाषा ६ मार्केटिङ मा टेक्नोलोजी को उपयोग को अग्रगामी मध्ये एक हो। यदि त्यहाँ एउटै कम्पनी थियो जुन मैले क्रस-मध्यम विज्ञापन, स्वचालन, र प्रत्येकको शक्तिको लाभ उठाउने क्षमता बुझेकोसँग काम गरेको छु, यो परिभाषा6 हो।
स्कट र टोली उद्योग मा पूर्ण विचार नेता हो। मलाई एक रात माइकल कोगन (सीईओ) र स्कटसँग डिनरमा जान पाउँदा खुसी लाग्यो र यो ताजा हावाको सास थियो। म एटलान्टाबाट एक बज मा उडें, विचारहरु संग जीवित र हाम्रो उत्पादन सुधार गर्न फर्कन उत्साहित।
माइक्रोसफ्टले उनीहरूको सरलता र विशेषज्ञताको लागि डेफिनिशन6लाई बारम्बार मान्यता दिएको छ। यो एक अविश्वसनीय टोली हो! जब हामी 'भविष्यको एजेन्सी' लाई हेर्छौं, मलाई लाग्छ Definition6 पहिले नै उत्कृष्ट उदाहरण हो!
तपाईं यहाँ हुनुहुन्थ्यो र मलाई थाहा दिनुभएकोमा धन्यवाद, स्कट!